Gaari dhuxul waday oo lagu qarxiyay inta u dhaxeysa Jowhar iyo Balcad
Ugu yaraan hal qof ayaa geeriyooday iyada oo uu qof kale ku dhaawacmay kaddib markii Garai Xamuul ah oo dhuxul waday ay Miino kula qaraxday inta u dhaxeysa degaannada Gololey Daa'uud iyo Haanta Sheekh oo ka tirsan Shabeellaha dhexe.
Qofka dhintay ayaa lagu sheegay wadaha Gaariga,kaas oo magaciisa lagu sheegay Bashiir,halka qofka dhaawacmayna uu yahay kaaliyihii Wadaha dhintay.
Sidoo kale Ciidamo ka tirsan AMISOM ayaa la sheegayaa iyana in ay isla degaankaas maanta kala kulmeen qarax iyo rasaas inkasta oo aysan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay AMISOM iyo Al-shabaab.
Ilo wareed ku sugan degaanka Hanata Sheekh ayaa sheegay in Ciidamada AMISOM oo sameynayay mid ka mid ah Gawaaridooda oo cilladoobay ay la kulmeen qarax iyo rasaas iyada oo aan ilaa hadda la xaqiijin khasaaraha rasiga ah ee ka dhashay weerarkaas.
Waddada isku xirta Jowhar iyo Balcad ee Gobolka Shabeellaha dhexe ayaa hadda ka mid noqoneysa meelaha ugu amniga daran Gobolkaas,iyada oo dadka Rayidka ah ee waddadaas ku safra ay ka baqayaan miinooyinka maalin waliba ku qarxaya.
Tiro dhowr jeer ah Ciidamada Dowladda Gawaarida ay wataan ayey Miinooyin kula qarxeen waddadaas iyada oo inta badanna AL-shabaab sheeganeysay mas’uuliyadda weerarrada ka dhacaya Waddada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho.